Mogadishu Journal » Haweeney xalay lagu dilay gurigeeda dulleedka Muqdisho
Mjournal :-Kooko hubeysan ayaa xalay waxaa ay dedgaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho ku dileen Haweeney Da’ aheyd, taasi oo lagu dhex toogtay Gurigeeda.
Dadka degaanka ayaa waxa ay sheegeen Dableyda dilka geysatay in ay si farsameysan u dileen Haweeneyda, kadibna ay ka baxsadeen goobta, maadaama ay aheyd xilli habeen ah.
Siteey Maxamed Aadan ayaa lagu magacaabi jiray Haweeneyda la dilay, waxaana ay Da’ ahaan jirtay 65 sano, iyada oo warar soo baxaya ay sheegayaan in horey ay uga tirsanaan jirtay Ciidanka Millitariga Soomaaliya.
Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa waxa ay gaareen dilka kadib goobta, waxaana ay halkaasi ka sameeyeen baaritaano la xiriira sida uu dilka u dhacay, inkastoo ilaa hadda aanan la sheegin cid loo soo qabtay falkaasi.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo maanta la caleemo saarayo